အတ္တ၏ ဒဏ်ရာများ: ဆုတောင်းတိုင်းသာ ..ပြည့်မယ်ဆိုရင်...(၂)
ကိုယ်တောင်းတဲ့ဆု.......ပြည့်စုံဖို့ ကတော့ အချက်(၅)ချက် ပြည့်စုံမှ အောင်မြင်မယ် ဆိုတာတော့ ပြောခဲ့ပြီးပါပီ။ အခု အဲဒီ ငါးချက်က ထပ်ရှင်းပါမယ်။
(၁) သဒ္ဓါ ....... ဆိုတာက မြန်မာလိုယုံကြည်မှု ကိုခေါ်ပါသည်။ မိမိတောင်းတဲ့ဆု အပေါ်မှာ ရကို ရရမယ် ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုပါ။ ကိုယ်ကတော့ ဆုတစ်ခုခုကို ဆုတောင်းလိုက်ပေမယ့်..... ရမှ ရပါ့လား၊ သူများ တောင်းလို့ သာ တောင်းရတယ်...။ တယ် မထင်ပါဘူး၊ စသည်ဖြင့်.... သံသယဖြင့်တောင်းပါကလည်း.. ထိုဆုသည် ပြည့်လာစရာအကြောင်းမရှိပေ။ ကိုယ်တောင်တဲ့ဆု ပြည့်ရကိုပြည့်ရမယ်၊ ရကို ရ ရမယ် လို့သံဓိဋ္ဌာန်ချပြီး ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ဆုတောင်းရပါမယ်..။
(၂) သီလ.... ဆိုတာက အလေ့အကျင့်၊ အလေ့သဘော လို့ မြန်မာလို တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်...။ ကိုယ်တောင်းတဲ့ ဆုပြည့်ဖို့ ရန်..ကောင်းသော အလေ့အကျင့်များကို မြဲမြံစွာ စောင့်ထိန်း ဆောက်တည်ဖို့ လိုပါတယ်..။ လူမှာ စောင့်ထိန်း လေ့ကျင့်အပ်သော သီလကတော့ (၅)ပါး ရှိပါတယ်..။ (က) သူ့ အသက်သတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန် (ခ) သူ့ ဥစ္စာခိုးခြင်း မှရှောင်ကြဉ်ရန်၊ (ဂ)လိမ်လည်ပြောဆိုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန်၊ (ဃ) မှားယွင်းသော ကာမမှုမှရှောင်ကြဉ်ရန်၊ (င) မေ့လျော့စေ တတ်သော သေရည်သေရက်စသည်များမှီဝဲခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန် တို့ ဖြစ်ပါတယ်...။ အဆိုပါ ငါးပါးသီလကို စောင့်ထိန်းခြင်း သည်လည်း ကိုယ်တောင်းတဲ့ဆုပြည့်ရန် အထောက်အပံကောင်း တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
(၃) သုတ......ဆိုတာကတော့ သင်ကြားအပ်သော အတတ် ၊ အကြားအမြင် လို့ ပြောရမယ် ထင်ပါတယ်..။ ကိုယ်တောင်းတဲ့ဆုနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့အကြားအမြင်သုတ များ ရှိရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လေ့လာ သင်ကြား ရမှာဖြစ်ပါတယ်..။ ဥပမာ.. ကိုယ်က ဆရာဝန် ဆုတောင်းရင်... ဆေးပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြားအမြင်၊ အတတ်ပညာများကို တတ်မြောက်ဖို့ လိုပါတယ်..။ (အကြားအမြင်ဆိုသည်မှာ ဥုံဖွ အကြားအမြင်ကိုမဆိုလိုပါ)
(၄) စာဂ....ဆိုတာကတော့ စွန့် ခြင်း ပေးကမ်းခြင်း လို့ အဘိဓာန်မှာ ဖွင့်ဆိုပါတယ်။ လှူဒါန်းခြင်းလို့ ပြောရင်လည်းရပါတယ်။ ကျောင်းဆရာဆုကိုတောင်းထားသူတစ်ယောက်ဟာ.....ထိုဆုအတွက် သူများကို ပညာဒါန ပေးလှူရန်လိုအပ်ပါတယ်...။
(၅) ပညာ........ ဆိုသည်မှာ အပြားအားဖြင့် သိခြင်း လို့ ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်.။ ကိုယ်တောင်းတဲ့ဆုပြည့်ဖို့ ရန် ..သူနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို သိထားဖို့ ဆိုလိုပါတယ်..။
ဒါကြောင့် တောင်းတဲ့ဆုကဖြင့်များပီ....ဘာကြောင့် မပြည့်လဲလို့ ဆိုရင်...အထက်ပါ ငါးချက်မှာ.....တစ်ချက်ချက်သော်လည်းကောင်း...၊ အားလုံးသော်လည်းကောင်းလိုအပ်နေလို့ ပါလို့ ........။
ပြီးပြည့်စုံအောင်ကျင့်နိုင် ဖြည့်နိုင် ကြံနိုင်သူများ.....ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ .......တိုက်တွန်း ဆန္ဒပြုရင်း......။
posted by အတ္တ @ September 15, 2009 1 Comments
At September 4, 2011 at 8:11 AM , Anonymous said...
Thank you! I enjoy reading your blogalot.